isivumelwano: fumana i-samsung galaxy tab e simahla kwi-t, kufuna isivumelwano seminyaka emi-2
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Idili: Fumana i-Samsung Galaxy Tab E yasimahla kwi-AT & T, ifuna ikhontrakthi yeminyaka emi-2
Idili: Fumana i-Samsung Galaxy Tab E yasimahla kwi-AT & T, ifuna ikhontrakthi yeminyaka emi-2
Inqanaba lokungena le-Samsung kunye neapos; inqanaba lethebhulethi ye-E ithebhulethi yakhe yaqala e-United States kunyaka ophelileyo. Isilayidi sakhutshwa nge-Android 5.1 Lollipop, kodwa i-Samsung yanikezela abasebenzisi ngohlaziyo lwe-Android 6.0 Marshmallow kwiinyanga ezininzi kamva.
I-AT & T inesidima esikhulu kwi-Samsung Galaxy Tab E ukuba uyafuna kwakhona kwithebhulethi efanelekileyo ye-Android. Umntu ophethe i-US ubonelela ngesilayidi simahla, ukuba nje uzibophelela kwisivumelwano seminyaka emibini.
Gcina ukhumbula ukuba i-AT & T ibonelela ngohlobo lwe-8.0-intshi, hayi imodeli enkulu ye-9.6-intshi. Ngokungafaniyo umahluko wehlabathi kwiGlass Tab E eza ne-1.3GHz quad-core Qualcomm Snapdragon 410 processor, AT & T & apos; imodeli ifakwe i-1.3GHz quad-core Exynos 3475 CPU, edityaniswa ne-1.5GB RAM kunye ne-16GB yokugcina eyandisiweyo .
Inekhamera ye-5-megapixel ephambili kwicala elingasemva kunye nenye yesibini yekhamera ye-2-megapixel ngaphambili. Umboniso we-8-intshi ubonakalisa isisombululo seepikseli eziyi-1280 x 800.
Ibhetri enkulu ye-5,000 mAh ithembisa ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-13 zexesha lokusetyenziswa okanye ukuya kuthi ga kwiintsuku ezingama-25 zexesha lokulinda. Izibonelelo zeSamsung yeTable E evela kwinkxaso yenethiwekhi ye-GSM nayo, kodwa iWi-Fi kunye neBluetooth 4.1 yokunxibelelana ziyafumaneka nazo.
I-AT & T ayitsho nokuba eli lixesha elinikiweyo okanye i-Galaxy Tab E iya kuhlala ifumaneka simahla kwiimvumelwano zeminyaka emi-2 ide ifikelele esiphelweni senqanaba lobomi (i-EOL).
umthombo: I-AT & T.
Jonga uluhlu olupheleleyo (s) lweCostco emnyama yangoLwesihlanu ye2020
Imithombo yeendaba kwezentlalo ilindele ukuba iApple izame kwakhona ngalo mbala kwi-iPhone 13
Uyakha njani eyakho i-smartphone
I-Apple iPhone X vs Samsung Galaxy Qaphela 8
I-Apple iPhone X vs Google Pixel 2 XL: ukuthelekiswa kwekhamera
Ukuqala namhlanje Imidlalo ye-Epic itshixelwe ngaphandle kweeakhawunti zayo ze-iOS kunye nee-MacOS
Iimpawu ezilahlekileyo ze-iPhone esifuna ukubuyela kwi-iPhone 13 kunye ne-14